मौसमी फ्लू र कोरोनाका लक्षण मिल्दाजुल्दा, पहिचान गर्न सके दुबैबाट बच्न सकिन्छ : चिकित्सक
झापा । निरन्तर झरी पर्ने मौसम छ । पानी नपरेका बेला तालुनै पोल्ने गरिको घाम लाग्छ । घामनै नलागेपनि मौसम हुप्प पर्छ । तातो हावा चल्छ । यसले तपाईहाम्रो शरिरमा एकैछिनमा तातो एकै छिनमा चिसो बनाउँछ । यस्तो बेलामा तपाई हामीमा मौसमी रुघा खोकी लाग्ने, ज्वारो आउने वा निरन्तर खोकी पनि लाग्न सक्छ ।
यी लक्षणहरु कोरोनासँग पनि मिल्नेखालका हुन । त्यसैले मौसमी रुघाखोकी अर्थात फ्लू र कोरोना आफुमा के भएको हो भनेर आफु कसरी निश्चिन्त हुने ? आम्दा अस्पतालका जनरल मेडिसिन डा. चन्दन ठाकुरका अनुसार नाकबाट पानीजस्तै फोहोरपदार्थ निस्किरहने, नाक चिलाउने, आँखा चिलाउने, खोकी लाग्यो वा ज्वरो मात्र आएको छ भने त्यो मौसमी फ्लू हो । यो कम्तिमा ३ देखि ५ वा बढिमा ७ दिन सम्म चल्ने डा. ठाकुरको भनाई छ ।
तर कोरोना छ भने माथी भनिएका लक्षणसँगसँगै खाँटी सुख्खा हुने, ज्वारो निरन्तर आइरहने र यो निरन्तर ७ देखि माथी सम्मनै चलिरहेमा कोरोना हुन सक्छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा अलिअलि ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, रुघामर्की लाग्यो भने कोरोना हो कि भनेर संका सुरु हुन्छ । संका गरेर सर्तक रहनु राम्रो भएपनि कतिपय चाहि अत्तालीने गर्नु हुन्छ । अत्तालीएर कोरोना परिक्षण गरिहाल्ने पनि अहिले बानी लाग्न थाल्यो । के मौसमी फ्ल्लुका लक्षण देखिने बित्तीकै पनि कोरोना परिक्षण गरिहाल्नु पर्छ त भन्ने प्रश्नमा डा. चन्दनको जवाफ छ । ‘पर्दैन । तर आफु सुरक्षीत र संयमित भएर चाहि बस्न पर्छ । बिस्तारै निको हुन्छ ।’
तर मौसमी फ्लू त हो नि भनेर हेलचेक्राई गर्ने चाहि गर्न हुँदैन । यस्तो बेलामा सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात मिचिमिच धुने । हाछ्यू गर्दा कुईना वा रुमालले मुख छोप्ने चाहि गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मौसमी फ्लूुबाट पनि बचिने र अहिले महामरीका रुपमा देखिरहिएको कोरोनाबाट बच्न सकिने डा. ठाकुरले सुझाव दिनु भएको छ ।
मौसमी फ्लूका लक्षण देखिहालेमा आत्तीदै अस्पताल जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अस्पताल क्षेत्र झन जोखिम हो । सकभर अस्पताल नजाने । चिकित्सकसँग टेलिफोन गरेर परामर्ष लिने र त्यहि बमोजिमको आवश्यक मात्रामा औषधी सेवन गर्ने । साथै मन तातो पानी र झोलिलो खानेकुरा बढि मात्रामा खाने गर्दा घरमै बसेर मौसमी फ्ल्लुबाट बच्न सकिन्छ र कोरोनाको जोखिममा पनि नपरिने चिकित्सकको सल्लाह छ ।
आइतबार १०, साउन २०७८ १६:२३:२० मा प्रकाशित